musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Israel Breaking News » Israel Inovhurazve kune Vafambi Vepasirese
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Israel Breaking News • nhau • chengetedzo • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Kekutanga mumwedzi inopfuura gumi nemisere, vafambi vakabaiwa uye veboka vanobva kuUnited States neCanada vanogamuchirwa kupinda muIsrael uye kuongorora hupfumi hwenyika, nhoroondo, uye nzvimbo dzinoshamisa.
Israel inovhurazve miganhu yevashanyi vekuAmerica neCanada.
Mitemo mitsva yekupinda inoda kutora PCR bvunzo maawa makumi manomwe nemaviri isati yasimuka uye kutora PCR bvunzo pakusvika muIsrael nekutevera kuvharirwa.
Makurukota eIsrael akagadzira chirongwa chataurwa pamusoro icho chakatenderwa neCCID cabinet uye chichatanga muna Mbudzi 1, 2021.
The Israel Ministry of Tourism yakazivisa kuti kubva nhasi, vashanyi vakabaiwa nhomba kubva kuUnited States neCanada vanogona kutangazve rwendo rwese kuIsrael. Mushure mekutangisa chirongwa chekuvhurazve mutyairi muna Chivabvu 2021, icho chakatanga kubvumira nhamba yakasarudzwa yemapoka evashanyi kuti apinde munyika, vafambi vese vakavharirwa vanogona kushanyira Israel mushure mekuvharwa kwenguva refu nekuda kwezvirango zveCCIDID-19.
"Kutaura kuti tiri kufara kuti Israel yave kuvhurazve vafambi nhasi inyaya," akadaro Eyal Carlin, Tourism Commissioner kuNorth America. "Israel yatora matanho anoshamisa kuchengetedza vanhu vayo nevashanyi uye isu tinodada nekuona COVID-yakachengeteka uye isingakanganwike rwendo. Tine majekiseni anotungamira ekudzivirira uye mikana isingaperi yezviitwa zvekunze, isu tine shungu dzekugamuchira vashanyi vadzoka nemaoko akazaruka - hongu, panzvimbo yakachengeteka yemagariro. "
Mutungamiriri weIsrael, Naftali Bennett pamwe nemamwe Makurukota akati wandei munyika (Tourism, Health, Transportation, etc.), vauya pamwe chete vakagadzira chirongwa chinotevera chakabvumidzwa neCOVID cabinet uye chichatanga kushanda nhasi, Mbudzi 1 - pamwe chete. budiriro uye mitsva yeCOVID yakasiyana ichitariswa zvakanyanya.
"Isu tanga takamirira nguva ino, kudzosa vafambi vekunze munyika medu, kwenguva yakareba," akadaro Yoel Razvozov, Gurukota rezvekushanya kweIsrael. "Tinofara kugovera nyika yedu nemunhu wese zvakare uye ndinodada kushanda pamwe neMutungamiriri wedu Naftali Bennett pakati pemamwe Makurukota ari munyika kuti tive nechokwadi chekudzoka mukushanya."
Kubva nhasi, mirairo yekupinda inosanganisira:
Kutora bvunzo yePCR maawa makumi manomwe nembiri isati yasimuka nendege, kuzadza chiziviso chemutyairi, uye kutora bvunzo yePCR pakusvika muIsrael (inoda kugara wega muhotera kudzamara zvabuda zvadzoka kana maawa makumi maviri nemana apfuura - mudiki pavaviri).
Kuti apinde munyika, munhu anofanira:
Akabaiwa madhosi maviri emushonga wePfizer kana Moderna mazuva gumi nemana zuva rekupinda muIsrael risati rasvika (mazuva gumi nemana anofanira kunge apfuura kubva pakugashira dhomo rechipiri pakusvika muIsrael, asi pasina mazuva anopfuura zana nemakumi masere ekubva kuIsrael - kureva, kana kwave nemwedzi mitanhatu kubva padanho rechipiri, unozoda booster shot kuti upinde).
Avo vakagamuchira iyo booster vaccine dosi, uye angangoita mazuva gumi nemana apfuura kubva pavakagamuchirwa, vanogona kupinda muIsrael.
Vakabayiwa nedosi rimwe chete rekudzivirira kweJohnson & Johnson mazuva gumi nemana zuva rekupinda muIsrael risati rasvika (mazuva gumi nemana anofanirwa kunge apfuura kubva pavakagamuchirwa kechipiri pavakasvika kuIsrael, asi pasina mazuva anopfuura zana nemakumi masere vabva kuIsrael - kureva, kana kwave nemwedzi mitanhatu kubva padhorosi rako rechipiri, iwe uchada booster pfuti kuti upinde).
Wapora kubva kuCOVID-19 uye vanopa humbowo hwezvakabuda muyedzo yeNAAT angangoita mazuva gumi nerimwe zuva rekupinda muIsrael risati rasvika (pasina kupfuura mazuva zana nemakumi masere pakubuda muIsrael).
Wapora kubva kuCCIDID-19 uye wagamuchira inokwana dosi imwe chete yemishonga yakatenderwa neWHO.
Nhungamiro dzakadzama dzinogona kuwanikwa HERE. Uyezve, ndapota shanya https://israel.travel/ kune zvese zvinogadziridzwa pamaprotocol ekupinda uye mhinduro dzinouya kuFAQs.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezvekufamba kuenda kuIsrael kana kuronga rwendo rwako, shanya https://israel.travel/. Kuti ugare wakafemerwa, tevera Israel Ministry of Tourism pa Facebook, Instagram, uye Twitter.